China Isicelo Industries mveliso kunye nabenzi | Khokela
Ukuchaneka kwe-CNC yinkqubo yokuvelisa eguquguqukayo kunye nendleko yokuhambelana ehambelana noluhlu olukhulu lwezixhobo. Kananjalo, isetyenziswa kuluhlu lwamashishini ahlukeneyo, kwizicelo ezahlukeneyo ze-CNC machining ineendlela ezininzi ezisetyenziselwa amashishini amaninzi.
Siyazingca ukwenza prototype kunye neenxalenye imveliso limited kunye neendibano ezahlukeneyo mveliso.
I-Wuxi Lead Precision Machinery ivelise izinto zeenkampani kwezi mveliso zilandelayo:
Ukusebenza okuphezulu. Ukusebenza okuphezulu. Ukupheliswa kwetekhnoloji, okusenza sikwazi ukuba ngabathengi baseMelika abathengisi bamachiza ngokuthe ngqo kwiminyaka esi-7 ilandelelana.
Icandelo lezomkhosi lijikela rhoqo kwi-CNC machining yokwenza iprototyping kunye nokuveliswa kwamalungu abukhali nathembekileyo anokumelana nokunxiba kunye nokukrazula ngokugcina okuncinci.
Uninzi lwala malungu alala namanye amashishini afana ne-aerospace kunye ne-elektroniki, nangona amandla oomatshini be-CNC ukubonelela ngezinto ezifunwayo kunye nezinto eziphuculweyo ziluncedo ngakumbi kumzi-mveliso ofuna ukwenziwa kwezinto ezintsha kunye nokhuseleko.
I-20pcs oomatshini be-CNC bakulungele ukufumana iodolo yakho ye-automation. Nokuba lilungu elinye elintsonkothileyo okanye lilula nje, uya kugcina imveliso yakho ibaleka ngokubonelela ngezinto o-odola, ngexesha, njengoko kucatshuliweyo.
Ukusebenzisa i-CNC machining kwiindawo ezichanekileyo, ezinokuthenjwa ezinje ngeepiston, iisilinda, iintonga, izikhonkwane kunye nezivalo.
Zibanga prototype kunye nokubaleka okufutshane kwezahlulo kunye neendibano. Siyaziwa ngokukwazi kwethu ukwenza izinto ezintsonkothileyo zeemoto, ngakumbi kwicandelo lokulungisa iimoto.
Umzi mveliso weemoto usebenzisa i-CNC machining kuzo zombini iiprototyping kunye nemveliso. Isinyithi esandisiweyo sinokulungiswa ngeebhloko zeesilinda, iibhokisi zegiya, iivalves, ii-axels, kunye nezinye izinto, ngelixa iplastiki inokulungiswa ngomatshini njengeepaneli zedashboard kunye neerhasi zegesi.
I-CNC ikwaluncedo ekudaleni izixhobo ezizenzekelayo zeemoto kunye nezinto ezinokutshintsha ukususela kumaxesha okutshintsha ngokukhawuleza kwaye akukho nxalenye incinci efunekayo.
Asinabo oomatshini bokuchaneka kuphela bokuvelisa icandelo lakho elibonakalayo, sikwanazo nezixhobo zovavanyo zamva nje kunye nabahloli abanezakhono zokuqinisekisa ukuba icandelo lakho lokujonga liyahambelana nemigaqo yakho.
Ukusuka kwisixhobo sotyando sisiya kuvavanyo lonyango, senze izinto ezininzi ezichanekileyo ngokwezonyango. Singamaqabane anexabiso eliphezulu kwimakethi yezoNyango.
Ukusukela ukuba i-CNC machining inokusetyenziswa kwizinto ezahlukeneyo ezikhuselekileyo kwezonyango, kwaye ukusukela ukuba le nkqubo ifanelekile kwiindawo ezithile zesiko, inezicelo ezininzi kwishishini lezonyango. Ukunyamezelana okuqinileyo okufunyanwa yi-CNC machining kubalulekile ekusebenzeni okuphezulu kwamayeza onyango ngomatshini.
Isinki yobushushu, imeko yefowuni ephathekayo, icebo lokucoca ulwelo, njl., Singakwazi ukujongana nawo onke amalungu akho kunye neendibano ezivela kwimodeli ukusuka kwimveliso ngezinto ezahlukeneyo ozifunayo.
Ukuchaneka kwe-CNC kusetyenziswa ngokubanzi ukuvelisa kunye nokuveliswa kwezinto zombane ezifana neelaptops kunye nee-smartphones. I-chassis ye-Apple Macbook, umzekelo, yi-CNC eyenziwe ngomatshini kwi-aluminium ekhutshiweyo emva koko yenziwa i-anodized.
Kushishino elektroniki, machining isetyenziselwa ukwenza PCBs, housings, jigs, zalapho kunye nezinye izinto.
Sinikezela CNC Machining, CNC Milling, Ukuguqula i-CNC, Metal Ukunyathela, Iphepha lesinyithi iinkonzo nge ialuminiyam, intsimbi, yenziwe ngentsimbi eshayinayo, titanium, ubhedu, iplastiki, ukhuni, njl.
Okulandelayo: CNC Milling